पूर्व जर्नेलकी छोरीले चिठी लेखेर संसार छाडेपछि… « Naya Page
काठमाडौं, १४ साउन । पूर्व दुईतारे जर्नेल डा. पूर्ण सिलवालको घरलाई अहिले एउटा असह्य बेदनाले घेरेको छ ।
जर्नेल डा. पूर्णकी २७ वर्षिया कान्छी छोरी नयोनिकाले य सप्रकार सोमबार धर्ति छाडिन् । सेन्ट मेरिजकी प्रोडक्ट र भारतमा स्नातकोत्तरको अध्ययन सिध्याएर स्वदेश फर्किएकी उनी कुनै काम वा पेशामा आवद्ध हुने रुची राख्दिन थिइन् । परिवारका सदस्यहरूले कुनै जागिर वा समय बिताउने माध्यमका रूपमा केही न केही काममा लगाउने प्रयास गरेको धेरै भयो ।
दुई वर्षअघि दिदीको विवाह भयो । यो वर्ष उनै बहिनीको पालो थियो । मंसिरतिर विवाह गर्ने सोचमा परिवार थियो । तर, नयोनिका न घरबाट निस्कन मान्ने, न विवाहका कुरै सुन्न चाहने ! अन्ततः अस्ती १२ गते दिउँसो घाँटीमा सलको पासो बेरेर प्राण त्यागिन् ।